अनलाइन ‘जब’को फण्डा : उल्टै पैसा बुझाएर पाएको जागिर तलब आउनेबेला चट ! – ramechhapkhabar.com
अनलाइन ‘जब’को फण्डा : उल्टै पैसा बुझाएर पाएको जागिर तलब आउनेबेला चट !
काठमाडौं, ४ माघ ।
विराटनगरका हरिनारायण (नाम परिर्वतन) कक्षा १२ को परीक्षा सकिएपछि रोजगारीको खोजीमा थिए ।
विगत २ वर्षदेखि साथीहरूसँग मिलेर बानेश्वर क्षेत्रमा बस्दै आएका उनी अब घरबाट पैसा माग्नुभन्दा जागिर खान्छु भन्ने मनस्थितिमिा पुगेका थिए ।
त्यही क्रममा उनले सामाजिक सञ्जाल फेसबूकमा ‘जब भ्याकेन्सी’ नामको पेजमा विभिन्न विज्ञापनहरू देखे । त्यहाँ सम्पर्क नम्बर पनि राखिएको थियो ।
विज्ञापनमा १० हजारदेखि ४० हजारसम्म मासिक पैसा पाउने भनिएकाले उनले विज्ञापनमा राखिएको नम्बरमा सम्पर्क गरे ।
म्यानेजमेन्ट पढेका हरिनारायणलाई आफूले पढेकै डाटा म्यानेजमेन्टको विज्ञापन सिफारिश गरियो र उनले त्यसैमा काम गर्ने इच्छा व्यक्त गरे ।
शुरूमा जागिरका लागि १५ सय रुपैयाँको फारम भर्नुपर्छ भनिएपछि उनले अनलाइन पेमेन्ट माध्यम इ–सेवामार्फत पैसा पठाइदिए ।
उनलाई ती व्यक्तिले विभिन्न डाटाहरू दिए । उनले घरमै बसेर एक महिना काम गरे । तर तलब आउनुपर्ने समयमा त्यो पेजले उनलाई ब्लक गरिदियो ।
उनीसँग सम्पर्क हुने व्यक्तिले पनि उनको मोबाइल नम्बर ब्लक गरिदियो, पछि त्यो मोबाइल नम्बर नै ‘स्वीच अफ’ भयो ।
काभ्रेकी सविना (नाम परिर्वन) विगत ५ वर्षदेखि काठमाडौं बस्दै आएकी छिन् ।
व्यवस्थापन संकायमा स्नातक सकेर विवाह गरेपछि बेरोजगार थिइन्, सविना । पहिलो सन्तान जन्माएपछि उनले अगाडि गर्दै आएको जागिर छाड्नु परेको थियो ।
श्रीमानलाई केही सहयोग गर्न सकिन्छ भन्ने हिसाबले जागिरको खोजीमा थिइन्, उनी ।
उनले पनि फेसबूकमा उही ‘जब भ्याकेन्सी’ नामको पेजमा ‘डाटा म्यानेजमेन्ट’को जागिर खुलेको र त्यो पनि घरमै बसेर गर्न सकिने कुरा लेखेको देखिन् । बच्चा हेर्दै काम गर्ने योजनामा उनले त्यहाँ रहेको नम्बरमा सम्पर्क गरिन् ।
उनलाई ईसेवा आईडीमा ३ हजार ५ सय रुपैयाँ फारम शुल्कबापतको रकम बुझाउनुपर्ने भनियो, उनले बुझाइन् । काम पनि पाइन् ।
एक महिनासम्म अनलाइनमार्फत नै डाटा म्यानेजमेन्टको काम गरिन् । तर तलब आउने समयमा उनलाई पनि उक्त व्यक्तिले पेज र सम्पर्क नम्बर दुवैबाट ब्लक गरिदियो । मोबाइल पनि ‘स्वीच अफ’ भयो ।
त्यसपछि बल्ल ठगिएको थाहा पाएकी उनले प्रहरीमा उजुरी दिइन् ।
प्रहरीले ‘जब भ्याकेन्सी’ नामको फेसबूक पेजका प्रयोगकर्ता दोलखा जिरी नगरपालिका– ८ घर भई भक्तपुर काँडाघारी बस्ने २३ वर्षीय शिव खड्कालाई पुस २९ गते पक्राउ गर्‍यो ।
४० हजारसम्मको रोजगारी दिने बहानामा खड्काले फेसबूकमा रोजगारको विज्ञपान राख्ने र फारम भर्ने बहानामा १५ सयदेखि ३५ सय रुपैयाँ लिने गरेको अनुसन्धानमा खुलेको महानगरीय अपराध महाशाखाका प्रवक्ता प्रहरी उपरीक्षक (एसपी) ईश्वर कार्कीले बताए ।
‘फेसबूकमा पेज बनाएर रोजगारी दिने बहानामा ४३ जना युवायुवतीलाई ठगी गरेको पाइएको छ,’ एसपी कार्कीले लोकान्तरसँग भने, ‘उनले एकजना व्यक्तिबाट ३५ सयसम्म लिएको पाइएको छ ।’
एसपी कार्कीका अनुसार पछिल्लो समय सामाजिक सञ्जाल फेसबूकमार्फत हुने ठगीका घटना बढिरहेका छन् ।
‘अहिले फेसबूकबाट सामानहरू बिक्री गर्ने, कपडाहरू बिक्री गर्ने, लक्की ड्र पर्‍यो भन्दै रकम माग्ने खालका अपराधहरू बढेका छन्,’ एसपी कार्कीले लोकान्तरसँग भने, ‘यस्ता खालका सामाजिक सञ्जालमा हुने ठगीबाट बच्नका लागि महाशाखाले अनुरोध समेत गर्दै आएको छ ।’
काठमाडौं, ८ असोज । मलेसियामा अबैधानिक अवस्थामा रहेका विदेशि नागरिकहरुको लागि मलेसिया सरकारले “रिक्यालीब्रेसन्...
यी खोप दुई डोज लगाएका मात्रै मलेसिया प्रवश गर्न पाउने, जान्नुहोस कुनकुन ?
खुशीको खबर : मलेसियाको रोजगारीमा नेपाली श्रमिक जान पाउने ?
निर्दहि महिला, जसले मलेसियामा बच्चा जन्माएर कोठामै पलास्टिकमा पोको पारेर राखिन र यस्तो अवस्थामा पक्राउ परिन !
मलेसियामा रहेका कामदारको तलब बढ्ने हल्ला हो कि साचो, के हो वास्तविकता ?